ဖုန်းလေး တစ်လုံးတည်း သာ အသုံးပြုပြီး သူမ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေးတစ်ပုဒ် ကို ပရိသတ်တွေဆီ ချပြလာတဲ့ ခြူးလေး – Shwe Sar
ဖုန်းလေး တစ်လုံးတည်း သာ အသုံးပြုပြီး သူမ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေးတစ်ပုဒ် ကို ပရိသတ်တွေဆီ ချပြလာတဲ့ ခြူးလေး
ဇာတ်လမ်းတွဲမ င်းသမီးလေး တစ်လ က်ဖြစ်တဲ့ ခြူးလေးက “ပန်းနုသွေး”၊ “ပို၍လှသောမနက်ဖြန်”၊ “ပဉ္စလက်ရွာ”၊ “ချစ်ရပါသောနွေ”၊ “နွေလည်ညရဲ့လမင်း” စတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲတွေနဲ့ အောင်မြင် မှုတွေ ရရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတူညီတဲ့ ဇာတ်ရုပ် ကာရိုက်တာတွေကို အမျိုးမျိုး သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ခြူးလေးက ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ အနုပညာကေ ဝမလေးလို့တောင် တင်စားလို့ရပါတယ်။ ခြူးေ လးက လည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ မရိုးနိုင်တဲ့ အနုပညာအသ စ်တွေကို ချပြဖို့ ကြိုးစားနေသူတ စ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မှာတော့ ခြူးလေးက ဖုန်းလေးတစ်လုံးတည်းသာ အသုံးပြုပြီး သူမကိုယ်တိုင် အစအ ဆုံးဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေကို ချြ ပလာ ပါတယ်။ ခြူးလေးက “သင်တန်း တက်ခဲ့ စဉ်က Project – 1 ( Who am I ? ) ဖုန်းလေးနဲ့ ဘဲ အစဆုံး ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ခဲ့ပုံလေး ပါပေါ့ … နော က် ခံ တီးလုံးေ လး အကြိုက်ဆုံး ….” ဆိုပြီး သူမ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံး ဖန်တီးဖြ စ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို အခုလို ပဲ မျှဝေပေးလာ ပါတယ်။
ခြူးလေးကတော့ ပရိသတ်တွေ အတွက် အသစ် အသစ်သော အနုပညာတွေ ကို ချပြနိုင်ဖို့အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ် ကြီးလည်း ခြူးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကိုကြည့်ပြီး သဘောကျကြ မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး လည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်ေ န့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုေ တာင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
photo and video – Chu lay
ဇာတျလမျးတှဲမ ငျးသမီးလေး တဈလ ကျဖွဈတဲ့ ခွူးလေးက “ပနျးနုသှေး”၊ “ပို၍လှသောမနကျဖွနျ”၊ “ပဉ်စလကျရှာ”၊ “ခဈြရပါသောနှေ”၊ “နှလေညျညရဲ့လမငျး” စတဲ့ ဇာတျလမျး တှဲတှနေဲ့ အောငျမွငျ မှုတှေ ရရှိလာတာ ဖွဈပါတယျ။
မတူညီတဲ့ ဇာတျရုပျ ကာရိုကျတာတှကေို အမြိုးမြိုး သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ခွူးလေးက ဒီဘကျခတျေရဲ့ အနုပညာကေ ဝမလေးလို့တောငျ တငျစားလို့ရပါတယျ။ ခွူးေ လးက လညျး သူမရဲ့ ပရိသတျတှေ အတှကျ တဈနေ့ ထကျတဈနေ့ မရိုးနိုငျတဲ့ အနုပညာအသ ဈတှကေို ခပြွဖို့ ကွိုးစားနသေူတ ဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ မှာတော့ ခွူးလေးက ဖုနျးလေးတဈလုံးတညျးသာ အသုံးပွုပွီး သူမကိုယျတိုငျ အစအ ဆုံးဖနျတီးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေးတဈပုဒျကို ပရိသတျတှကေို ခြွ ပလာ ပါတယျ။ ခွူးလေးက “သငျတနျး တကျခဲ့ စဉျက Project – 1 ( Who am I ? ) ဖုနျးလေးနဲ့ ဘဲ အစဆုံး ကိုယျတိုငျ ဖနျတီး ခဲ့ပုံလေး ပါပေါ့ … နော ကျ ခံ တီးလုံးေ လး အကွိုကျဆုံး ….” ဆိုပွီး သူမ ကိုယျတိုငျ အစအဆုံး ဖနျတီးဖွ ဈခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို အခုလို ပဲ မြှဝပေေးလာ ပါတယျ။
ခွူးလေးကတော့ ပရိသတျတှေ အတှကျ အသဈ အသဈသော အနုပညာတှေ ကို ခပြွနိုငျဖို့အတှကျ အားသှနျခှနျစိုကျကွိုးစားနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျ ကွီးလညျး ခွူးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကိုကွညျ့ပွီး သဘောကကြွ မယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး လညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈေ န့ကို ပိုငျဆိုငျနိုငျ ကွပါစလေို့ ဆုေ တာငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။
မြင့်ြ မတ်နဲ့ ပတ် သတ် တဲ့ သတင်းေ တွ အပေါ် တုန့်ပြန်ြေ ပာဆို လာတဲ့ ယုန်လေး
ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ မိုးရာ သီ ဘယ်လောက်တောင် သာယာ လိုက်သလဲ ဆိုပြီး ပုံရိပ် လှလှလေးတွေမျှဝေလာ တဲ့ ဟန်နာယူရီ